पेट्रोलको लाइन कुर्ने जुक्ति – MySansar
पेट्रोलको लाइन कुर्ने जुक्ति
Posted on December 10, 2015 by Salokya
सरकारी रेटमा पेट्रोल पाउनु पनि दुर्लभै कुरा भइसकेको छ अहिले। तिहारअघि बाँडिएको थियो सर्वसाधारणलाई पेट्रोल। त्यसपछि अहिले बल्ल बाँडिँदैछ। पेट्रोल बाँड्ने भन्ने बित्तिकै पेट्रोल पम्महरु बाहिर लामै लाइन लाग्छ मोटरसाइकलहरुको। रातभर लाइन राख्नुपर्छ। त्यस क्रममा कसैको पाङ्ग्रा चोरिने, कसैको के चोरिने पनि हुने रहेछ। त्यसैले एक जनाले यस्तो जुक्ति पनि लगाएछन्।
हुन पनि हो, लाइनै राख्नलाई किन मोटरसाइकलै राख्नुपर्‍यो र। जे राखे पनि भइहाल्यो। पेट्रोल भर्नमात्र मोटरसाइकल ल्याए भइगो। यो कसको आइडिया हो चाहिँ थाहा भएन। फेसबुकमा धेरै जनाले यस्तो पनि भयो रे भनी फोटो राखेका छन्।
त्यसो त पेट्रोलको लाइनै बस्न नपर्ने गरी एसएमएस प्रणाली अपनाउने भन्ने तयारी पनि गरिएको थियो। तर यो आजसम्म कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन।
3 thoughts on “पेट्रोलको लाइन कुर्ने जुक्ति”
कुर्सि राखे पनि हुने हो कि ? घरको थोत्रो मुढा काम लाग्ला जस्तो छ |
आजको समयमा जुन किसिमले मानवीय संशाधन र भौतिक संरचनाको विकास हुँदै गैरहेको छ तेही गतिमा मानिसहरु ति कुराहरुलाई प्राप्त गर्ने वा त्यो संग यथावत रहने प्रबृत्ति पनि हावी हुँदै गएको नकार्न सकिन्न तेस्को ज्वलन्त उदाहरण हो बाइक जुन नेपालमा जीवनको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ कुनैपनि हालतमा अरु भन्दा अघि पुग्नु आफुलाई जसरि होस् सहज ढंग बाट सो कुरा पाउन खोज्नु देखि लिएर स्वार्थताको चरम बिन्दु झैँ बनेको छ बाइक ..चाहे अरु जुनसुकै अवस्थामा किन नपरोस आफु अघि भए पुग्ने हाम्रो समाजको पर्याय बन्न पुगेको छ चाहे बाटो भत्किएको होस् साँघुरो होस् अरुले मिचेको होस् के मतलव बाइक छिरे पुगी त हाल्यो .आज नेपालमा बाइक नहुने विरलै होलान र तेस्को विकल्प खोज्ने पनि शायदै होलान तर एक लिटरमा दस जनालाई हुने काम एक्लैको लागि भै रहेको कसले पो सोच्लान ? यो बुढ्यौली मश्तिश्कको सरकारले त अवश्य सम्भव नै भएन र हाम्रो युवा वाहुल नेपाली समाज संग भने फुर्सद नै भएन होइन र …?
पासवान चमार डोम मुसहर चेपांग गाड़ा सत्तार दनुवार मेचे कोचे बादी यो सबै युपि बिहारबाट नेपाल पसेको हो। अशिक्षित् अन्धकारहरु नेपाल पसेको ( यिनीहरु पछि पसेको ) नया ठाउँमा केहि हुने कुरो पनि भएन। खाली खुट्टा , झुत्रो लुगा लाउदैमा नेपाली हुन्छ र ?
LeaveaReply to Aanda Cancel reply